Beraketa : mirongatra ny asan-dahalo, mitsoa-ponenana ny mponina | NewsMada
Beraketa : mirongatra ny asan-dahalo, mitsoa-ponenana ny mponina
Nirefodrefotra ny poa-basin’ny dahalo tao Beraketa ny herinandro lasa teo tao Beraketa. Notafihin’ny andian-dahalo mirongo basy ny tanàna. Mitsoaka ny tanàna ny ankamaroan’ny mponina…
Tsy misy intsony ny omby fa lasan’ny dahalo avokoa ao amin’ny kaominina Beraketa faritra Androy. Tao amin’ny fokontany Farahantsa, 4 km miala ny tanàna, tokantrano maromaro indray notahifin’ny dahalo, ny herinandro teo. Omby anjatony indray lasan’ny dahalo. Mitaintaina sady mandry andriran’antsy ny mponina manoloana izany. Tsy misy intsony ny omby ao an-tanàna, ireo lasan’ny dahalo koa tsy misy tafaverina intsony na eo aza ny fanarahan-dia ataon’ny mponina miaraka tamin’ny mpitandro filaminana mampandry tany. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, mikasa hitsoaka ny tanàna ny mponina noho ny tsy filaminan’ny tanàna amin’ity resaka asan-dahalo ity. Misy ihany ireo miaramila mampandry tany, saingy tsy mahasakana ireo dahalo hanao ny asa ratsiny ny fisian’izy ireo.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraiki-panjakana ireo mponina ao Beraketa mba hijery akaiky ity asan-dahalo mirongatra isan’andro amin’iny faritra iny. Nilaza ny solontenam-panjakana avy any an-toerana fa tsy misy afa-tsy ny fampiasana helikoptera ao Ihosy ihany ny vahaolana haingana ahafahana manara-dia ireo dahalo indrindra ny kizo fieren’ireo dahalo.
Na eo aza anefa izany, manao izay ho afany hatrany ny mpitandro filaminana amin’ny fanenjehana ireo dahalo. Efa misy ny paikady manokana napetraka amin’ny ahafahana manao ny fanarahan-dia sy ny fisamborana ireo dahalo. Efa maro rahateo koa ireo zandary lavo am-perinasa amin’ny afitsoky ny asan-dahalo.